10 Zava-mahavariana mahaliana momba ny Owl
Biby sy natiora Birds
Nankasitraka ny fahendren'izy ireo sy ny fahendren'izy ireo izy ireo, saingy nanesoeso toy ny bibikely, fitaovana fialantsasatra ary mpihinan-jiolahy mpangalatra, ny owls dia nanana fifankatiavana / fankahalana hatramin'ny olombelona hatramin'ny nanombohan'ny tantara voarakitra.
Misy karazany roa karazana osy
Ny ankamaroan'ny karazana owls eo ho eo dia antsoina hoe soavaly tena izy, izay manana lohan-doha lehibe misy tarehimarika mivantana, rambony matevina, ary volom-borona marevaka. Ny sisa, izay mitaky karazany kely ambiny folo, dia karazana amboadia, izay afaka manavaka ny endrik'izy ireo amin'ny endriny, ny tongony lava be milina miaraka amin'ny haingo matanjaka, ary ny haben'ny habeny. Ankoatra ny vorona iraisana, izay misy fizarazarana maneran-tany, dia ny vorondolo tena mahazatra indrindra, farafaharatsiny amin'ny mponina any Amerika Avaratra sy Eorazia, no tena owls.
Ny ankamaroan'ny tena manokana dia mpihinana hazandrano
Ny evolisiona dia manana fomba mahomby hanelanelana ny biby amin'ny niches manokana: satria karazam-borona hafa (toy ny hawks sy ny voromahery) mihaza mandritra ny andro, ny ankamaroan'ny vorondolo dia manamboatra hihaza amin'ny alina. Ny fanangonam-peo main'ny owls dia mahatonga azy ireo ho tsy hita maso amin'ny rembiny-izay misy bibikely, biby mampinono madinidinika ary vorona hafa-ary ny elany dia mifototra mba hitifirana mangina tanteraka. Ireo fanitsiana, miaraka amin'ny mason'izy ireo (jereo ny sary manaraka), dia manamboatra owls ny sasany amin'ireo mpilatsaka an-tsokajy tsara indrindra amin'ny planeta, amboadia sy coyotes tsy voatery.
Ny masom-borona dia miorina eo amin'ny solony
Ny iray amin'ireo zavatra mahavariana indrindra amin'ny owls dia ny fomba handehanany ny lohan'izy ireo manontolo rehefa mijery zavatra izy, fa tsy manindrahindra ny masony fotsiny ao anaty sôkôsy, toy ny ankamaroan'ny biby fihinam-boa. Ny anton'izany dia ny owls mila maso lehibe sy manoloana ny fanangonana hazavana tsy hay hazavaina mandritra ny fihodinan'ny alina, ary ny evolisiona dia tsy afaka manavotra ny musculature hamela azy ireo hiova. Ny antsantsa kosa dia manana hafetsen-po mihetsiketsika izay mamela azy ireo hamadika ny lohany telo-faran'ny boribory, na 270 degre-raha oharina amin'ny 90 degre ho an'ny olombelona salan'isan'ny olona!
Azonao atao ny miresaka betsaka momba ny Owl iray amin'ny Pellets
Ny volony dia mitelina ny remby azy, tsy misy moka na mena. Ny ankamaroan'ny biby mampalahelo dia simba, fa ny faritra tsy azo tapahina toy ny taolana, volon'ondry, ary volom-bolo-dia lasa fako mafy, antsoina hoe "pellet", ora vitsivitsy taorian'ny sakafo. Ny antsipiriany dia somary fikomiana, saingy amin'ny fijerena ny pellets amin'ny an-tsipiriany, ireo mpikaroka dia afaka mamantatra tsara ny antsipirihan'ny owl iray, ary rehefa. (Ny vorondolo kely dia tsy mamokatra pellets, satria ny ray aman-dreniny no mamelona azy ireo amin'ny sakafo malemy, mihodina ao amin'ny akaniny.)
Ny vavy dia mihoatra noho ny lehilahy
Tsy misy olona matoky tanteraka hoe nahoana, ny antsasa-manilan'ny vehivavy dia tsy dia lehibe loatra raha oharina amin'ny lehilahy mitovy aminy. Ny teoria iray dia ny fihetsika kely kokoa kokoa ny lehilahy mpitovo, ary noho izany dia mety kokoa ny manangona lasibatra raha mihalehibe ny vehivavy; Ny iray hafa dia satria, satria tsy tian'ny vehivavy ny atody, dia mila vatana lehibe kokoa izy ireo mba hitazonana ny tenany mandritra ny fotoana lava tsy misakafo. Ny teoria fahatelo dia tsy dia mampihetsi-po, fa mampientam-po kokoa: satria ny vorondolo vavy matetika dia manafika ary mandroaka lehilahy tsy mety amin'ny fotoam-pivoriana, ny habeny kely kokoa sy ny fahaiza-manaon'ny lahy dia tsy manelingelina azy ireo.
Ny tselatra dia tsy hentitra toy ny eritreritrao
Ao amin'ny boky, horonan-tsary, ary fandaharana amin'ny fahitalavitra, ny owls dia azo lazaina ho tena hentitra tsara - saingy ny zava-misy dia tsy azo atao ny mampiofana owl, fa ny vorona kosa dia maro karazana toy ny papango, lobaka, ary ny voromahailala azo ampianarina hikaroka zavatra ary mitadidy asa tsotra. Amin'ny ankapobeny, ny olona dia mihevitra fa ny owls dia mahira-tsaina noho ny antony iray izay eritreretiny fa ny ankizy rehetra mitafy solomaso dia hendry: maso lehibe kokoa noho ny mahazatra no mampiseho ny fahatsapana ny faharanitan-tsaina ambony. (Tsy midika akory izany fa ny vorondolo dia tena moana, na koa mila fitaovan'ny atidoha mba hihaza tsara amin'ny alina!)
Mety ho efa nisy ny dinôzôra
Tena sarotra ny mamantatra ny niandohan'ny owls, izay tsy dia fahita loatra amin'ny nofinofy misy ny alina, ny faladia sy ny voromahery. Fantatsika fa vorona mitovy karazana toy ny Berruornis sy Ogygoptynx dia niaina 60 tapitrisa taona lasa izay, nandritra ny vanim-potoanan'ny Paleocene , izay midika fa ny tena razambe owls dia niandoha tamin'ny dinôzôra hatramin'ny faran'ny vanim- potoana Kretace . Ny owls dia iray amin'ireo antokom-borona indrindra teratany indrindra, ary tsy misy afa-tsy ny gambrirds ihany (izany hoe ny akohokely, ny trondro ary ny haavony) ny fandaminana Galliformes .
Ny Talenta dia manana talenta mahery
Toy ny vorona izay mihaza sy mamono kely be dia be, ny owls dia mahazo ny sasany amin'ireo haingo matanjaka indrindra any amin'ny fanjakana aviavina, izay afaka mamantatra sy manaisotra ny hoditra, ny bitro, ary ny biby mampinono hafa. Ny iray amin'ny karazana vorondolo lehibe indrindra, ny vorondolo lehibe lehibe misy vorondolo , dia afaka manalefaka ny talantany miaraka amin'ny hery eo amin'ny 300 litatra eo ho eo, ary azo ampitahaina amin'ny fihoaran'ny olombelona mafy indrindra . Misy vorondolo lehibe manana hadona azo oharina amin'ny haben'ny voromahery lehibe kokoa, izay mety hanazava hoe nahoana ny vorona noana no tsy hanafika ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy.
Ny Owl dia tsy manamboatra biby tena tsara
Raha manaisotra ny zava-misy fa tsy ara-dalàna, any Etazonia sy any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ny olona manokana dia mitazona vorondolo ho biby fiompy, misy antony marobe hoe nahoana no tsy hevitra tsara izany. Amin'ny lafiny iray, ny owls dia vao mihinana sakafo vao tonga, izay midika fa tsy maintsy mitazona tolotra tsy tapaka, akondro, bitro ary biby mampinono kely hafa; Ho an'ny iray hafa, ny soavaly sy ny talons of owls dia tena maranitra, noho izany dia tsy maintsy miezaka ihany koa ny tahirin-tsakafo; ary toy ny hoe tsy ampy ny vorondolo dia afaka miaina mandritra ny 30 taona mahery, noho izany dia hametraka ny fonon-tananao amin'ny tanjaka ianao ary handrotsa-jaza ao anaty tranom-bavany tsara hatrany amin'ny faratampony.
Nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny kolontsain'olombelona ny tena
Ny civilizations fahiny dia nanana fomba fijery maro momba ny vorondolo. Ny Grika dia nifidy owls mba hanehoana an'i Athéne, andriamanibavin'ny fahendrena, saingy ny tahotra no nanandrana ny Romanina tamin'io vorona io, tamin'ny fandinihana azy io ho mpitondra marary. Ny Azteky sy ny Mayana dia nankahala sy natahotra ny voromahery ho mariky ny fahafatesana sy ny faharavana, raha toa kosa ny foko Amerikanina maro (anisan'izany Apaches sy Seminoles) dia matahotra ny zanany amin'ny tantaran'ireo vorondolo miandry ao anaty haizina mba hitondra azy ireo. Ny Ejipsianina, izay niavaka tamin'ireo sivilizasiona rehetra ireo, dia nijery ny voromahery, nino fa ireo vorona ireo dia niaro ny fanahin'ireo maty rehefa nandeha tany ambanin'ny tany izy ireo.
8 Sakafo ara-javamaniry voajanahary lehibe kokoa noho ny hoditra
Santa Sparrow (Song Sparrow)
Manan-tsaina kokoa noho ny sainao ny tsinay
30 vorona fototra an'ny vorona
Ny vorona mahafatifaty indrindra eran-tany
Fantaro ny anjara asan'ny Bald Eagle amin'ny lova amerikana
Adiresin'ny Oakwood University
Ny rakitsoratry ny mpikatroka rehetra hifaninana amin'ny fitondrana matanjaka
Ahoana ny fijerena ny valin'ny solonao raha tsy misy fanampiana
Ny fiantraikan'ny fakàna sary sy ny Surrealism ao Georgia O'Keeffe
Ny fanomezana sy ny fangatahana fototra
Manao biodiesel avy amin'ny algae
Ahoana no anamafisan'ny biôgrafia ny fahamarinana momba ny evolisiona?
Hira misy lalao baolina kitra
Inona no lesona lehibe manahaka ny any ivelany?
Masoandro ao Taurus - Zodiac mirakitra
Ny oksizenina mahatsikaiky ho an'ny ankizy
Induction (logic sy lahateny)
Top 10 Fanontaniana momba ny toe-karena tsy voavaha
Ireo sekoly ambaratonga ambony ho an'ny tontolon'ny arisin-tsarin'ny tetikasa
Mianara ireo fepetra ara-panatanjahantena amin'ny teny alemana
Inona no voka-dratsin'ny solifara indrindra?
Toeram-ponenana mistery sy havoana mavesatra
Fihaonan'ny Bachelorettes amin'ny Bachelor, Season 12
Fitaovana Ballet nutcracker
Benedictine College GPA, SAT sy ACT Data
Ny fomba hanamboarana ny fiakarana an-dàlam-be miakatra (CESA)
Fomba entina mitazona ny boatin-tseranana sy misoroka ny fahavoazana
Nahoana no fanalan-jaza - Nahoana no misafidy ny fanalan-jaza?
Ny fahasamihafana eo amin'ny 'Of' sy 'From'